Blomberg ga-abụ ụlọ ọhụrụ Mark Gurman | Esi m mac
Blomberg ga-abụ ụlọ ọhụrụ Mark Gurman
Ee, na Tuesday gara aga, akụkọ ahụ gbasaara mgbasa ozi na otu n'ime nnukwu ndị na-anụ akụkọ banyere ngwaahịa Apple, Mark Gurman, Ahapụrụ m web 9to5mac mgbe ihe karịrị afọ 6 gachara. Taa ntakịrị ihe amaara banyere ọdịnihu nke Gurman, ọ dị ka ụlọ ọhụrụ ebe ọ nwere ike ide ole na ole ma ụfọdụ asịrị bụ Bloomberg. O nwere ike ịbụ na ọnụ ọgụgụ akụ na ụba nke mgbanwe ahụ dị mkpa ma ugbu a Mark nọ n'okporo ụzọ na n'amaghị ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ, n'ezie ọtụtụ ndị ọzọ na-eleta. Eziokwu bụ na ọ nwere ike ọ gaghị abụ na ọ hapụrụ ihe niile n'otu oge ma ugbu a ọ ga-adị mkpa iji hụ ma ọ ga-enwe ike ịme otu isiokwu nyocha na ụlọ ọhụrụ ya.
Fọdụ mgbasa ozi kọwara mgbe ekwuputara akụkọ banyere ọpụpụ ya, na Apple n'onwe ya goro ya ọrụ ka ọ ghara ịmalite mkpọsa nke ngwaahịa ma ọ bụ sọftụwia ya n'ọdịnihu, ebe ọ bụ na nke a metụtara ọrụ ụlọ ọrụ ahụ ma ọ dịghị ma ọlị. Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ọ na-emetụta mbak ụlọ ọrụ maka oge ụfọdụ ma anyị echeghị na ụlọ ọrụ ahụ nwere mmasị na ya, mana o doro anya na ọ bụghị ihe mere o ji laa.
Ugbu a ọ ga-abụ oge ịgbaso asịrị na nsị site na saịtị Bloomberg, nke n'aka nke ọzọ na-abụkarị okwu gbasara akụkọ niile na mmegharị nke ụlọ ọrụ Cupertino, n'agbanyeghị ịbụ onye ọka iwu zuru oke. Anyị nwere obi ụtọ na anyị ga-ele Gurman anya, na-atụ anya na ọ ga-eme ka amụma ya banyere Apple site n'oge ruo n'oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Blomberg ga-abụ ụlọ ọhụrụ Mark Gurman
The iPhone 7 ga-enwe 32GB nke nchekwa nchekwa ma ọ bụghị 16GB
Ngwa desktọọpụ n'efu iji hazie na Mac